सौन्दर्यविद्, सुषमा महराको तिज मेकअप टिप्सस् : - Jagaran News Jagaran News
Published On : 18 August, 2020 2:08 pm
सबै महिलाले तीजमा विशेष मेकअप गर्न खोज्छन् । महिलाको विशेष चाड भएकाले आफूलाई सुन्दर बनाउन जोकोहीले पनि प्रयास गर्छ नै ।
यो चाडमा धेरैले सोह्र श्रृंगार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छन् । यसैले मेकअप गर्दा एकदम ध्यान पुयाएर गर्नुपर्छ । यसपटकको तीज भने कोरोना भाईरसका कारण खल्लो भएको छ । सरकारले पनि सार्वजनिक स्थलमा भेला नहुन र बढि मानिस जम्मा हुन समेत बन्देज लगाएको छ ।
तर पनि यो नेपाली महिलाहरुको मान चाड भएकोले घरमै बसेर पनि यसलाई हर्ष उल्लासका साथ मनाउन सकिन्छ ।
यो बेला चेलीहरु सौभाग्यको सूचक चुरा, पोते, धागो, रातो पहिरन र चोलीमा सजिएर रातो टीकाको साथमा ब्रत, उपासना, पूजाआजा र स्नानका साथै हृदयदेखिका कथा(व्यथाहरुलाई गीतको माध्यमद्धारा पस्केर भव्यताका साथ तीज मनाउँदछन् ।
माहिलाहरुको स्वतन्त्र पर्वको रुपमा रहेको तीज नेपली चेलीहरुका लागि विशेष गरी विवाहित नव—बुहारीहरुका लागि एउटा पर्व, खुशी र भेटघाटको मेला नै हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
परापूर्व कालमा सानै उमेर देखि महादेव स्वामी पाउँ भनी आराधना गरिहेकी हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीलाई उनका बाबु हिमालय पर्वतले महादेवसँग नभई विष्णुसँग विवाह गरिदिन लागेपछि पार्वतीले आफ्नो चाहना अनुरुप महादेव पति नपाउने भएको थाहा पाएपछि उनले आफ्ना साथीहरु डाँकी आफुलाई लुकाएर राखी दिन अनुरोध गरिन ।
र उनको अनुरोध अनुसार साथीहरुले पार्वतीलाई एउटा जंगलमा लगी लुकाएर आए । तत्पश्चात पार्वतीले त्यहि जंगलमा बसी महादेवको नाममा शिवलिङ्ग स्थापना गरी पूजा आराधना गरिरहिन् ।
अन्तत्वगत्वा उनी सफल भइन् अर्थात् उनले महादेव पति पाइन् यही साथीहरुद्वारा हरण गरी एकान्तमा राखेको बेला गरेको व्रत हुनाले उक्त व्रतको नाम हरितालिका रहन गयो ।
फलस्वरुप त्यही दिनदेखि प्रत्येक नेपाली चेलीहरुले भाद्र शुल्क द्वादशीदेखि ऋषि पञ्चमीसम्म तीज पर्व भनेर हरितालिका मनाउने थाले भन्ने किम्बदन्ती पाइन्छ ।
तीजमा कस्तो मेकअप गर्ने ?
सबै महिलाले तीजमा विशेष मेकअप गर्न खोज्छन्न । महिलाको विशेष चाड भएकाले आफूलाई सुन्दर बनाउन जोकोहीको प्रयास गर्छनै । यो चाडमा धेरैले सोह्रश्रृंगार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छन् ।
यसैले मेकअप गर्दा एकदम ध्यान पुयाएर गर्नुपर्छ । यो चाड गर्मी मौसमा पर्ने भएकाले सबै मेकअपका सामाग्रीहरु वाटर फ्रुफ प्रयोग गर्नुपर्छ । मेकअप गर्दा हामिले सुरुमा प्राईमर अनिवार्य लगाउनु पर्छ ।
प्राईमर लगाइसकेपछी अफ्नो स्कीन कलर अनुुसारको प्यानास्टीक क्रिमको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
जसले हामीलाई स्कीनमा भएको दाग धब्वाहरु लुकाउन पनि मद्त गर्दछ । साथै यसले स्कीनमा राम्रो बेस समेत दिन्छ । यसमाथि हामीले स्कीनलाई ब्राईट देखाउने हो भने स्कीन कलर भन्दा एक दुईसेट लाईट कलरको फाउन्डेसन लगाउनु पर्दछ ।
यसरी स्कीन बेस र फाउन्डेसन या बिबि क्रिम लगाउँदा अलि टाईम लगाएरनै ब्रस या मेकअप पफको सहायताले राम्ररी ब्लेन्ड गर्नु पर्दछ ।
त्यस पछी कम्प्याक पाउडर लगाउने कम्प्याक पाउडर लगाई सकेपछी आईब्रो सेफ दिने आखाँको मेकअप गर्ने आईल्यासेज राख्ने नोज तथा चिम कटिङ गर्ने लिपीस्टीक लगाउने यदि विवाहित महिला हो भने सिन्दुर टिका लगाउने त्यस पछी अहिले फेसनमा चलिरहेको हाईलाईटर लगाएर आफनो नाक गाला आइब्रोको साईटमा साइनीङ दिन सकिन्छ ।
अहिले पहिलाको जस्तो रोज लगाउने चलन धेरै हटि सकेको छ । यसरी मेकअप गरीसके पछी अनुहारको ओरीपरी ,कान घाटी लगायतका भागमा हल्का मेकअप टचप गर्नु पर्दछ ।
यसो गर्नाले मेअपको सेट मिल्न जान्छ । र मेकअप सकिएपछी मेकअप फिक्सर स्प्रे हल्का स्प्रे गर्नु पर्दछ । यसरी गरीएको मेकअपले हामि तीजमा दिन भरि नाचे पनि मेकअप टिकिरहन्छ ।
कस्तो कपाल बनाउने ?
तीजमा मेअपको साथ साथै हेयरको डिजाइन लाइ पनि ध्यान दिनु पर्दछ । यदि फुल मेकअप गरेकाछौं र मेकअप लाई लामो समय टिकाउनुछ भने कपालाई खुल्ला छोडेर बनाएको डिजाइनले केहि समय राम्रो देखिएता पनि नाच गानका साथै गर्मी मौसम भएको कारणले छोडेको कपालमा धेरै पसिना आएर मेकअप लाई समेत असर गर्दछ ।
त्यसैले यस कुरालाई ध्यानमा राखेर कपालको डिजाइन दिदा धागोले वाटेर डिजाइन दिने छोटो कपालछ भने त्यसलाइ पनि त्यसै अनुरुप काटाको साहयताले घाटी खुल्ला हुने गरेर जुरो बनाउने यसरी बाटेका कपाल र जुरो बनाएको कपालमा डेकुरेसन फल्लाओर वा चन्द्र बिन्दु लगाउदाँ राम्रो देखिने र लामो समय सम्म नाच गान गर्दा समेत कपालले हामीलाई केहि असर गर्दैन ।
( लेखिका(फेसियल हाउसकी प्रबन्ध निर्देशक सुषमा महरा महिला उद्यमी तथा बरिष्ठ ब्युटिशियन हुनुहुन्छ)
जाडो बढ्यो: ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यस्ता छन्
काठमाडौं, मंसिर ११ । जाडोयाम सुरु भइसकेको छ । बिहान र साँझ चिसो बढ्दै गएको